सुगर रोगबाट मुक्त हुने एकमात्र अचुक ओखती, सबैले एकचोटी पढेर शेयर गरि अरुलाई पनि जानकारी गराउनुहोस ! - Nepal Insider
Home/स्वास्थ्य/सुगर रोगबाट मुक्त हुने एकमात्र अचुक ओखती, सबैले एकचोटी पढेर शेयर गरि अरुलाई पनि जानकारी गराउनुहोस !
काठमाडौं । मधुमेह अर्थात सुगर रोग शरिरमा गुलियोको मात्रा बढि भएपछि लाग्ने गर्छ । अब चिन्ता नलिनुहोस् घरमा नै सजिलैसँग तपाईँको सुगर रोग ठिक पार्न सक्नुहुन्छ ।
यदि गुलियो चिजहरूको सेवनका कारण तपाईलाई मधुमेहले पीडित बनाएको हो भने तपाईले बेलको पात प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यस रोगबाट छुटकारा पाउन तपाईले १५ वटा बेलका पातलाई ३० ग्राम पानीमा मिलाएर पिस्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि ३ या ४ कालो मरिचको दालाई धुलो हुने गरी पिसेर पिसिएको बेलको पातसँग मिश्रण बनाई त्यसलाई एउटा सफा कपडाले छानेर आएको रसलाई सेवन गर्नुहोस् ।
यसप्रकारले बेलको पात पिसेर पिउँनाले तपाई केही महिनामा नै यो रोगबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ । त्यसैगरी बेलपत्रलाई अन्य तरिकाले प्रयोग गरेर पनि सेवन गर्न सकिन्छ।
नुहाउनु अघि कपालमा तेल किन लगाउने ?यस्तो रहेछ सोचेको भन्दा बढी फाइदा अवस्य पढ्नुहोस
सुन्दर रहनको लागी अनुहारको सुन्दरतासगैं कपाल पनि आकर्षक र बलियो हुन जरुरी छ । कपाल स्वस्थ, आकर्षक र बलियो बनाउँनको लागी के गर्ने भन्ने विषयको बारेमा थुप्रै जानकारी भएपनि कुन जानकारीलाई फलो गर्ने भन्ने दुबिधा छ